Shiinaha koollo silig derbiga ah, 11.0lb / 5kg (Max) jillaab adag, dib loo isticmaali karo jillaab aan kala go 'lahayn oo ubax ah, oo loo isticmaalo musqusha iyo jikada, qolka jiifka, qolka jiifka, caddaynta biyaha iyo saliida, biyo nadiif ah, soo celinta warshaddii sixirka iyo soosaarayaasha | Transben
Koollo darbi ah oo dheg dheg leh, 11.0lb / 5kg (Max) jillaab adag, jillaab aan kala go 'lahayn oo ubax ubax ah, oo loo isticmaalo musqusha iyo jikada, qolka jiifka, qolka fadhiga, caddaynta biyaha iyo saliidda, biyo nadiif ah, soo celinta sixirka
Culeys waara oo culus: Jillaab yar ayaa xoog leh. Awood qaadid xoog leh, culeys culus 5kg / 11lb waxyaabaha. Ma dhicin Xasilloon oo dib loo isticmaali karo
Si sahlan loo isticmaali karo: waxyaabo aan calaamadeyn ku xirneyn, isku xirnaansho qumman, diirka iyo koollada kaliya. Daldala qunyar socod iyo taag. Fudud oo dabacsan, Naqshad wanaagsan: Qaabka ayaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo baahida shaqsiyeed ee macaamiisha.
Biyo-ilaalin iyo huur-diidmo: kuma dhici doonto xitaa qubeyska musqusha hoosteeda. Wax saameyn ah kuma yeelanayo dhejistiisa iyo xoog ku dhejinta. Biyaha aan fiicnayn, caariyaysi iyo caabbinta saliidda. Iska caabin cimilo fiican
Iskudhac badan: Waxaa loo isticmaali karaa darbiyada siman sida dhoobada, dhalooyinka, dusha sare ee birta birta ah, albaabada ama alaabta guryaha ku dahaadhan bir (marka laga reebo derbiyada rinjiga leh ama darbiyada qalalan). Sudhan qalabka jikada, alaabada musqusha ama qorraxda kala duwan. Si buuxda u isticmaal qolka qolka.
Hore: Cover 3D silikoon wajiga maaskaro wajiga loogu talagalay Maaskarada Xaashida
Xiga: Silikoon Rolling Pin - Cajiye Roller for Pizza, Cookie with Wooden Handle & Nonstick Oogada
Caws silikoon dib loo isticmaali karo, silikoon dabacsan oo dheer ...
Loo isticmaali karo 3D silikoon wajiga maaskaro Cover for Shee ...
Muuqaal silsilad silsilad ah, oo loo isticmaalo qurxinta ...